15 Zviratidzo ZveMunhu Asina Kudzika: Hunhu hwePfungwa Dzakadzika - Blog
15 Signtale Signs Uri Kubata Nemunhu Asina Kudzika
Iwe unonzwa sekunge denderedzwa rako rezvemagariro riri kungotenderera richitenderedza kwakadzika kudzika kwedziva revanhu?
Mumwe wako kana mubereki anotaura zvinhu zvinoita kuti shaya yako idonhe neicho chepamusoro dipsh * ttery?
Funga nezvemapoinzi pazasi serudzi rwekutarisa kuti uone kana vanhu vauri kushamwaridzana navo nguva dzose vane hudzamu hwese hwehombodo.
Tarisa / teerera kuchinyorwa ichi:
15 Telltale Signs Uri Kubata Nemunhu Asina Kudzika vhidhiyo
Chitarisiko Chinhu chese
Hazvina basa kuti vanoonekwa sevakanaka here kana kuti kwete, chero bedzi vanhu vachifunga kuti vanopisa. Vanogona kunge vachidanana nemunhu anoshamisa kwazvo pasirese, asi vachadonhedza murume iyeye sechiuno chakashandiswa kana mumwe munhu anokwezva achivawana vachifarira.
Vanozvikomberedza nevanhu vakanaka, kunyangwe kana vasingavade chaizvo, uye votema vamwe kuve wakashata , mafuta, haashandisike, kana kungoti hautonhore zvakakwana zvekutandara nawo.
Ivo kuzvimisazve kazhinji futi, kuva chameleon kuenzanisa-mechi newavo wavari kuzvibatirira nawo mwedzi uno. Vanoenderana nechero chimiro chetsvarakadenga, kunyepedzera kuda chero mhando yemimhanzi, kungoenderana nechose chinopisa uye chine fashoni.
Vachadanana Nezve Chinzvimbo, Pane Kupfuura Rudo
Kune vanhu vazhinji vasina kudzika, vavari kufambidzana navo zvakakosha sekuita kwavo anoyevedza vamwe vanhu vanofunga kuti ndizvo. Muchokwadi, kana ivo vaine mumwe munhu anoonekwa seanopisa uye anodikanwa nevamwe vanhu, saka ivo vanotenda izvo zvinovasimudzira mumaziso evamwe vanhu.
Vanogona kusatomboda munhu wacho zvakanyanya kudaro, asi vanotaridzika zvakanaka pamwechete. Bhonasi inonongedza kana zvichinzi munhu akapfuma uye anoshandisa chitsama chemari pavari kuti avachengetedze.
Vachave Bail Pane Zvirongwa Kana Chinhu Chiri Nani Chichiuya Pamwe Pamwe
Iwe unoronga nemunhu uyu kushandisa nguva pamwe chete, kunyangwe kana kuri kungoenda kunonwa zvinwiwa kana bhaisikopo, asi vobva vakutumira mameseji panguva yekupedzisira kukuudza kuti havagone kuzviita.
Kwete nekuti ivo vari kurwara kana hama inovada, asi nekuti chimwe chiitiko che supercool chiri kuitika uye chiri chinhu chenguva imwe uye vakaiswa pane yevaenzi uye OMG, urombo, pamwe nguva inotevera.
Kuzivikanwa Makuhwa Uye Tsvina Kutaura
Eleanor Roosevelt akamboti: 'Pfungwa huru dzinokurukura mazano pakati nepfungwa dzinokurukura zviitiko zvidiki pfungwa dzinokurukura nezvevanhu.' Ndiyo nzvimbo yakanaka.
Kana mumwe munhu ari wepamusoro zvisina kunaka, mikana ndeyekuti chete zvinhu zvavachataura nezvazvo ndeapi vanhu vane mukurumbira vari kufambidzana kana vane nhumbu, uye ndiani munharaunda yako yemagariro akawana huremu.
Pfungwa, zviitiko zvazvino, kufungisisa pamusoro pezvose zvakasikwa hazvigamuchirwe nekuti zvinofinha, saka ivo vanofamba pamusoro pevamwe vanhu hupenyu panzvimbo.
Ivo Vanozviziva neVo 'Zvinhu'
Ava ndivo vanhu vanokurumidza kuratidzira gadget yazvino yavakatora (mumwe munhu asati ave neyake, hongu), uye vanopokana nezvekuti mbatya dzemugadziri wavo dzinodhura zvakadii.
Ivo vanokoshesa zvinhu zveumbozha zvine zvinyorwa zvepamusoro-soro, uye vane chokwadi chekutaura izvo zvinhu mukukurukurirana pese pazvinogoneka, kunyanya kana vachizoseka vachivabhadhara marii.
Kana iwe ukatarisa yavo yemagariro midhiya, iwe unowana zviuru gumi zvemifananidzo yemeso avo. 'Ini, ini, ini, nditarise' zvinoita kunge yavo mantra, uye iwe unogona kubheja kuti vanotora zana maselfie vasati vawana iwo akakwana kutumira iyo nguva. Bhonasi inonongedza kana ivo vari padyo nenzvimbo inoratidzira saka pane mifananidzo isingaperi yavo munzira dzese.
“Zvakwana Pamusoro Pangu, Unofungei Nezvangu?”
Usatombonetse kuudza munhu uyu chero chinhu nezvako uye kutarisira kuti azvichengete: chero chinhu chinobuda mumuromo mako chingori chena ruzha, uye chichava chakakanganikwa masekondi mushure mekunge zvataurwa.
Unogona kutaurira munhu asina kudzika gumi nemaviri kuti une chirwere chinouraya nzungu uye ivo vachiri kukupa imwe nguva imwe neimwe pavanokuona, ichiteverwa ne 'Right, OMG ini yandakanganwa. Ndine hurombo! LOL ”mhinduro.
Ivo Havachaite Chinhu Chero kunze kwekunge Chakavabatsira
Izvo chete zvinhu izvo vanhu ava vanobatanidzwa nazvo ndeizvo zvinozovabatsira neimwe nzira, neimwe nzira. Chiitiko cherudo icho chavari kubatsira nacho? Ehe, ndizvozvo kuitira kuti vaswedere padhuze nemukurumbira wemuno wavanoda kusangana. Munhu mutsva wavari kupedza nguva yakawanda naye anogona kuvapinza mulounge yeVIP kukirabhu yavo yavanofarira.
Zvichingoenda zvakadaro. Altruism haisi mumazwi avo: izvi zvese nezve izvo vamwe vanhu zvavanogona kuvaitira, uye nezvavanoda kuti vaite kuti zviitike.
7 Zviratidzo zveFake Shamwari: Maitiro Ekutarisa Imwe A Mile Off
30 Zvinokonzeresa Zvinokanganisa Zvinofanira Kusave Nenzvimbo Muupenyu Hwako
9 Mhando dzeShamwari KuDitch (Pasina Kunzwa Kwakaipa Kwazvo)
Zvinhu Zvakakomba Zvinovaita Kuti Vatize
Kana iwe uri kubata ne rwisana nemumwe wako , izvo zvinotonhorera: ivo vanounza waini uye ice cream pamusoro penzvimbo yako uye vanokubatsira iwe kurira pamusoro pavo kusvika kwaedza.
Kana, zvakadaro, iwe uri kukwikwidzana nerufu rwemubereki, kana dambudziko rakakomba rehutano, kana chero chimwe chinhu chakanyanya pamoyo, ivo havazove kwavanowanikwa. Pakarepo, zvakakosha chero chimwe chinhu chakambouya muhupenyu hwavo uye ndine hurombo mucheche, asi ivo havakwanisi izvozvi. Ivo totes kukutumira iwe rudo, zvakadaro.
Just… kubva kure.
Vanozozviratidza kwechinguva mumugwagwa kana dutu radzikama zvishoma, asi vanozonzvenga ruzivo nezve crap iwe yawaifanira kugadzirisa wega.
Vari 'Kungoedza Kubatsira'
Kutonga segehena rese, vachataura zvinhu zvinotyisa kune avo vakavakomberedza nenzira yekungoda 'kubatsira.'
Ivo vanozoshoropodza zvipfeko zvevanhu nekuvaudza zvavanofanira kupfeka, kana kuvabvunza kana vachinyatsoda kuodha chinhu icho panguva yekudya kwemasikati pane saradhi ine chipfeko chakareruka padivi.
Vachataura zvinyoronyoro pamusoro pekushongedzwa kwevanhu pamba, kana maitiro avanofanira kunge vachiranga vana vavo, uye kana vakashevedzwa nezvehunhu husina kunaka, vanozoita kunge vanovhundutswa nemhando yemhinduro.
Mushure mezvose, ivo vari kungoedza kubatsira.
… Asi batsira chii, chaizvo? Batsira iwe kuve munhu wavanoda zvirinani, kana zvakanyanya kufanana navo, hongu.
Iwe Unongova Usina Kunzwisisa
Izvi zvinoenda pamwe nepfungwa yapfuura: kana vakakuvadza neimwe yemabhururu asina kufunga ataurwa pamusoro, saka ndiwe yakanyanyisa uye ndine dzimwe nyaya dzekugadzirisa. Haisati iri mhaka yavo, uye ivo havazotori mutoro wechipi nechipi chakaipa.
Hupenyu Hwavo Hwakakwana
Hapana kana chinombofamba zvisina kunaka muhupenyu hwavo. Hukama hwavo, hupenyu hwemhuri, basa, hutano… zvese izvi zvinongonaka-bhoo. Ivo havagone kukuudza izvo zviri kunyatso kuitika munyika yavo - mumusoro mavo - nekuti izvi zvinogona kupwanya mufananidzo wakanyatsovakwa wavakapedza makore vachikuza.
Kusvika ivo sezvavanoda kuti iwe uzive, ivo havana kukundikana uye zvese zvavanoita zvakanaka, hapana chinyorwa icho, chikuru!
Ivo Vanoda Chiremera Zvese Kwavari
Izvo zvakakosha zvakanyanya izvo zvinofungwa nevamwe vese nezvavo, uye vanorwara pamoyo nemumuviri kana mumwe munhu achiba mabhanan'ana avo. Denga rinorambidza kana iwe uine chiziviso chekuita kana vanhu vari kuteerera kune zvaunofanira kutaura kana kuseka majee ako.
Kana mumwe munhu ari kutariswa - kunyangwe kwechipiri - munhu asina kudzika anonzwa kuregeredzwa. Vachaita nepavanogona napo kuba zvakare kujeka nekuzviita zvese nezvavo zvakare.
Zvakavanzika zvako ndezvekugovana
Kana iwe wakashinga kuvimba iyi inonzi shamwari nehumwe ruzivo, mikana ndeyekuti vamwe vese munharaunda yako yemagariro vazive zvese nezvayo mukati memaminitsi.
Ivo havakwanisi kuzvibatsira pachavo: majusi maburu eruzivo ndeekugovana, kwete kuchengeta zvakavanzika, uye iwe uchakurumidza kuona kuti hapana zvachose chinhu chitsvene sekufunga kwavo.
Dzichava nembwa kana iwe ukagovana chero ruzivo rwavakakuudza nezvazvo, asi kana madanho adzoserwa, chero chinhu chakagovaniswa ruzivo rweveruzhinji, mudiwa. Ingo gadzirisa nazvo.
Kuvimbika Chaiko Hakusi Muhunhu Hwavo
Kana zvasvika kune hushamwari kana hukama hwehukama, ivo vachatanga nekukurumidza kwechinguva kana mumwe munhu anonyanya kunakidza, anotaridzika, kana kunyanya kufadza akauya.
Kana iwe uri kufambidzana nemunhu akaita seizvi, shingairira iko kurambidzwa kusingadzivisike kana mumwe munhu achipenya akabata ziso rake, uye kana iwe uchifunga kuti urikudziridza hushamwari hwepedyo navo, nzwisisa kuti iwe ucharaswa seshangu dzegore rapfuura, pasina imwe pfungwa.
Mukupedzisa, ipapo: ku tsanangura munhu asina kudzika , tinofanirwa kufunga nezvehunhu hwavo hwakajairika. Kana iwe uchida kuziva kuti munhu asina kudzika, asinganzwisisike akafanana, heano 15 zviratidzo kutsvaga:
Ivo vanokoshesa kutaridzika kupfuura zvimwe zvese.
Vanodanana nechinzvimbo, pane rudo.
Ivo vanobhadhara pazvirongwa kana chimwe chinhu chiri nani chikauya.
Ivo vanofarira mukurumbira makuhwa uye marara vachitaura.
Vanozvibatanidza ne 'zvinhu' zvavo.
Ivo vanotora akawanda ma selfie.
Vanokanganwa zvinhu zvakakosha zvawakavaudza.
Vanoisa pamberi zvinhu zvinovabatsira.
Vanotiza kana zvinhu zvanyanya.
Vanotaura zvinhu zvinotyisa uye vanoti vaiedza kubatsira.
Vanoti iwe uri 'kunyanya kunzwira tsitsi' kana iwe ukagumburwa nezvavanotaura.
Ivo vanoratidzira mufananidzo wehupenyu hwakakwana.
Ivo vanofarira kuonekera.
Havagoni kuvimbwa nezvakavanzika zvako.
Ivo havana kuvimbika kushamwari kana vadikani.
sei varume vachidzoka mushure memwedzi
kuvimba sei nemunhu mushure mekukunyepera
kubatsira sei shamwari yakangorambana
zvinorevei kudanana nemumwe munhu zvinoreva
kutaura sei kana mukomana achitya manzwiro ake kwauri
mutsauko wekuda uye kuda mumwe munhu